Izixhobo zombane kunye neziXhobo zoMbane Abavelisi kunye nabaXhasi - China Umbane kunye nezixhobo zeMbane zoMbane
Ikhowudi yombala inductor
Isangqa semibala inductor sisixhobo esisebenzayo. Ama-inductors ahlala esetyenziswa kwiisekethi zombane. Ucingo lubekwe kwisiseko sesinyithi okanye i-coil yomoya-oyintloko yi-inductor. Xa okwangoku kudlula kwicandelo locingo, umhlaba othile wombane uza kwenziwa ujikeleze ucingo, kwaye eli candelo le-electromagnetic liya kuba nefuthe kwintambo kule ntsimi ye-electromagnetic. Oku sikubiza ngokuba sisiphumo sokungeniswa kombane. Ukomeleza ukungeniswa kwe-electromagnetic, abantu bahlala befaka ucingo kwi-coil ngenani elithile lokujika, kwaye siyibiza le coil ngokuba yikhoyili yokunyanzeliswa. Ukuchongwa okulula, i-coil ye-inductance ihlala ibizwa ngokuba yi-inductor okanye i-inductor.
Uqhagamshelwano lwetshiphu emsebenzi M Ukuya kwiVGA F
Esi sixhobo sokuvumela ukuba sikwazi ukuqhagamshela umz.
Esi sixhobo sokuvumela ukuba usebenzise naliphi na uqhagamshelo lwe-HDMI kwiscreen sakho esikhulu okanye esweni njengeefowuni zesikrini.
Isibuko esincinci sokubonisa ukuya kwi-DVI (24 + 5) F
Sebenzisa le adaptha ye-MX edibeneyo ukunxibelelana nesixhobo sakho kwiintlobo ezininzi zezixhobo zokubonisa, ezinje ngee-HDTVs, iiprojektha, kunye nokujonga.
TYPE C Ukubonisa iPort F
Umbono we-USB Type-C ukuya kwi-DisplayPort Adapter ikuvumela ukuba uqhagamshele iMac yakho, iPC okanye ilaptop eneDisplayPort ngaphezulu kwezibuko le-USB-C kwindawo yokujonga i-DisplayPort, iTV okanye iprojektha.
Veza iPort M ukuya kwi-HDMI F
Inesidibanisi esine-HDMI yamadoda kunye nesinxibelelanisi esiyindoda seDisplayPort. Le ntambo yeadaptha iguqula uqhagamshelo lweDisplayPort kwimveliso ye-HDMI kwaye ixhasa izigqibo ze-1080p kunye ne-720p kwiTV okanye kumbonisi weprojektha.
VGA M + Umsindo + Amandla kwi-HDMI F
Ivumela ukuphakanyiswa kwemiqondiso ye-analog VGA kwiimpawu zedijithali ze-HDMI, ezilungele ukudibanisa iiPC kunye neelaptops kwizibonisi ze-HDMI ezinje ngee-HDTV
I-Coaxial resonator, ekwabizwa ngokuba yi-dielectric resonator, uhlobo olutsha lwe-resonator eyenziwe ngelahleko ephantsi, izinto eziphezulu zedizili rhoqo njenge-barium titanate kunye ne-titanium dioxide. Ihlala isetyenziswa kwiBand Pass Filter (BPF), Voltage Controlled Oscillator (VCO). Itekhnoloji yokunyathela eyomileyo esemgangathweni ophezulu kunye nobuchwephesha bokuchaneka okuphezulu zisetyenziselwa ukufezekisa ukuhamba rhoqo.
Thermistor luhlobo lwezinto ezibuthathaka, ezinokwahlulwa zibe ngumlinganiso wobushushu obuchanekileyo (thermatoror (PTC) kunye neqondo lobushushu elingalinganiyo lobushushu (NTC) ngokomlingani wobushushu ohlukileyo. Uphawu oluqhelekileyo lwe-thermistor kukuba lubuthathaka kubushushu kwaye lubonisa amaxabiso ahlukeneyo oxhathiso kumaqondo obushushu ahlukeneyo.
Isiphelo sendonga yinxalenye enokuqonda uqhagamshelo lombane kwimveliso eyongezwayo, inezibonelelo zokuhamba rhoqo kokutshintsha, akukho jitter yoqhakamshelwano lomatshini.Iitheminali zering zidibanisa iingcingo ezimbini okanye nangaphezulu kwindawo yoqhagamshelo olunye, njengesixhobo sokukhusela isekethe. Iitheminali zeringi zihlala zisetyenziswa kwishishini leemoto kwaye zilungele ukudibanisa ukuhanjiswa koomatshini okanye oonxibelelana neenjini okanye ezinye iisekethe zemoto.